URhulumente ubhengeza ukunqunyanyiswa kweeProjekthi zoKhenketho eLa Digue
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » URhulumente ubhengeza ukunqunyanyiswa kweeProjekthi zoKhenketho eLa Digue
Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Ukuma ngokupheleleyo kwiiprojekthi zophuhliso lweendawo zokuhlala zokhenketho kuya kuqala ukusebenza nge-1 Agasti 2021, kude kube ngu-2023 njengoko amanyathelo afunekayo kwangoko ekhusela iLa Digue kuphuhliso olungaphaya kunye nokugcina indlela yayo yobomi.
Ukufunyanwa kwesifundo sokuthwala amandla eLa Digue eqhutywe ngo-2019 ukuya kwi-21 kubhengezwe namhlanje.
Isifundo sasigunyazisiwe ukuseka imeko yangoku yesiqithi.
Ikwabonelela ngezindululo zokukhokela urhulumente ekuphuhliseni imigaqo-nkqubo yokulawula ukukhula kwezokhenketho kunye nokufezekisa uphuhliso lokhenketho oluzinzileyo kwisiqithi esincinci.
ISebe lezoKhenketho lenze isibhengezo ngoMvulo we-26 kweyeKhala, kwintlanganiso ebibanjwe ngamagosa aphezulu eli Sebe nabachaphazelekayo eLa Digue ukunikezela ngeziphumo zophando lweCarrying Capacity Study yeLa Digue olwenziwe ngo-2019-21.
Olu phononongo, oluqhutywa yinkampani yabacebisi ezimeleyo, iSustainable Travel International, belugunyazisiwe ukuseka imeko yangoku yophuhliso lwesi siqithi kunye nokubonelela ngezindululo zokukhokela urhulumente ekuphuhliseni imigaqo-nkqubo yokulawula ukukhula kwezokhenketho kunye nokuphumeza uphuhliso lokhenketho oluzinzileyo kwisiqithi esincinci.
ILa Digue, yenye yezona zibalaseleyo Iziqithi zaseSeychelles kunye nendlela yayo yokuphila ebuyela emva, iindawo ezibalaseleyo zegranite kunye nolunye lolwandle olunefoto emhlabeni, yamkelwe ngo-2019, 17,868 ngobusuku ngabakhenkethi kwiindawo ezingama-658 zokuhlala ezikhoyo kwesi siqithi.
Iziphumo ziye zafumanisa ukuba kukho imfuneko yokuba isebe liphonononge iiprojekthi zophuhliso kwesi siqithi, uNkosk. Bernice Senaratne, uMlawuli woMgaqo-nkqubo, uPhando, uHlolo noVavanyo kwiSebe lezoKhenketho. Ikomkhulu leSebe kwiNdlu yeBhotani phambi koMphathiswa Wezangaphandle nezoKhenketho, uMnu Sylvestre Radegonde, uNobhala oyiNtloko kwezoKhenketho, uNkosazana Sherin Francis kunye noSinha Levkovic onguMlawuli woPhuhliso lweMveliso ngoMvulo.
Ngelixa lo msebenzi usenziwa, ukusukela nge-1 Agasti, kuya kubakho ukumisa okupheleleyo kubo bonke iiprojekthi zophuhliso lweendawo zokuhlala zokhenketho Kwisiqithi kude kube ngowama-2023 njengoko kufuneka kuthathwe amanyathelo akhawulezileyo ukukhusela isiqithi okanye de ukufika nokundwendwela kwabahambi, amaxabiso abuye. Oku kunqunyanyiswa kwenzeka kwimeko yophuhliso olungaphezulu lweziseko zophuhliso eziyimfuneko ezifana namanzi, umbane kunye nogutyulo lwelindle oluya kulungiselela ukukhula kolu shishino.
Isidingo sokuyila isicwangciso sokubuyisela kwimeko yesiqhelo ukumisela indlela yokubuyela kwimeko yesiqhelo kuthathelwa ingqalelo ifuthe lokhenketho kwesi siqithi nakuqoqosho lwesizwe, nakumashishini nakubemi ngokufanayo, kubalulekile, kuphononongo.
Iingcebiso eziphambili zoFundo lokuXhobisa ngo-2019-2020 lweLa Digue kubandakanya:
Itekhnoloji yoMnyhadala weeNtshatsheli zeIMEX NgoMnyhadala oMtshaMB...
Ileta yesiBini evuliweyo ngamaGosa aPhezulu e-UNWTO abongoza...
I-IATA ichaza iNgcali entsha yezoQoqosho